नेशनल लाईफको नाफा २७ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सचूकको अवस्था के छ ! – Insurance Khabar
नेशनल लाईफको नाफा २७ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सचूकको अवस्था के छ !
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०२:५२
इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौं: चैत मसान्तसम्म नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २२ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २७ दशमलव १० प्रतिशतले बढी हो । गतवर्षको तेश्रो त्रैमासमा कम्पनीले १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
१ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याएको नेशनल लाईफले जगेडा कोषमा ४३ करोड ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राखेको छ । त्यस्तै कम्पनीले जीवन बीमा कोषमा २० अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ र महाविपत्ती कोषमा १३ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ ।
कम्पनीले हालसम्म ४ अर्ब १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरी २ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । गतवर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आम्दानी ३ अर्ब १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने कम्पनीले १ अर्ब २२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
कम्पनीको कुल बीमालेख संख्या ८ लाख हजार २९ वटा रहेको छ । जसमध्ये ९ हजार ६ सय ३५ बीमालेखको १७ करोड ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ९६ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय २६ रुपैयाँ ५९ ४४ पैसा, पिई रेसियो ७६ दशमलव ३५ गुणा र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मुल्य १ हजार ४ सय ८० दशमलव ५४ रुपैयाँ रहेको छ ।